Nivoaka faingana Aluminum Lugs Manufacturers sy Suppliers | Nivoaka faingana China Aluminum Lugs Factory
Jera mpiara-dalana, mety., Ltd no mpanamboatra ny CLB tariby lugs ho hery ambony telegrama sy ny tsipika.
Nivoaka faingana ny fahazarana fotsiny tariby lugs (hafa antsoina hoe lugs connectors) dia nitombo ho an'ny herinaratra fitsinjarana ny fahefana andalana ny kV 1-36.
Nivoaka faingana lugs tariby dia mety ho aluminium sy ny varahina sy ny varahina telegrama, tsy mitovy habe sy ny rafitra hafa toy ny tafahitsoka wiring mpitarika, mafy orina, boribory, miaraka amin'ny mpitarika tariby habe 4 ka hatramin'ny 300 mm2.
Jera dia nianatra be ambany isan-karazany, fitaovana sy malefaka tariby avo tonon-taolana, sy ny samy hafa fiangonana sy ny fomba asa. Efa ampiharina ny mety indrindra tariby jointing Accessories mba ho famaranana sy ny fifandraisana ny fampitana andalana. Ny faritra ny fampiasana: entana, orinasa fanorenana, metro, lalamby, elektrika terminations boaty sy cabinets, fanidiana tariby ambanin'ny tany.
Izahay, ka mamoaka Seara lohany lugs tariby avy any ambony hery, harafesiny mahatohitra aliminioma fitaovana, miaraka amin'ny firapotsy voapetaka. Double Torque faritra ny aluminium horonan manome antoka matoky fifandraisana herinaratra ho an'ny diameters samy hafa ny tariby, sy ny tsy fisian'ny fanakianana fanoherana.
Rehetra ny herinaratra tariby lugs dia notsapaina araka ny firenena sy EN 50483 fepetra fitsapana.
Tongasoa eto amin'ny hifandray antsika antsipiriany kokoa, dia te-hanolotra anao indrindra ny vokatra isan-karazany vita amin'ny aluminium milina lugs tariby.
Tsy mifantoka amin'ny mpanjifa sy ny aluminium lugs tariby azo farany araka ny fepetra takiana mba hahatonga ny herinaratra fizarana fifandraisana azo antoka kokoa.
Seara lohany bolt Lug CLB 150-240
Seara lohany bolt Lug CLB 70-120
Seara lohany bolt Lug CLBV 150-240
Seara lohany bolt Lug CLB 4-35